Ndinofanira Kubhabhatidzwa Here?
Mibvunzo Inobvunza Vechiduku—Mhinduro Dzinoshanda, Bhuku 2
SARUDZA MUTAURO Albanian Amharic Arabic Armenian Bulgarian Cambodian Cebuano Chavacano ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Estonian Fijian Finnish French German Greek Haitian Creole Hausa Hungarian Icelandic Igbo Indonesian Isoko Italian Japanese Kabuverdianu Kikuyu Kirundi Korean Kwanyama Latvian Lithuanian Low German Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Maya Mongolian Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuChile Mutauro Wemasaini wokuEcuador Mutauro Wemasaini wokuKorea Myanmar Norwegian Okpe Oromo Persian Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Quechua (Bolivia) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Russian Samoan Sepedi Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Talian Tandroy Tatar Thai Tigrinya Tok Pisin Turkish Tuvaluan Twi Tzeltal Ukrainian Urdu Valencian Vietnamese Welsh Zulu
Maka zvirevo zvinotevera kuti chokwadi kana kuti nhema:
VaKristu vanofanira kubhabhatidzwa.
Chinangwa chikuru chokubhabhatidzwa ndechokukubatsira kuti usaita chivi.
Kubhabhatidzwa kunoita kuti uwane ruponeso.
Kana usina kubhabhatidzwa, hauzvidaviriri kuna Mwari pane zvaunoita.
Kana shamwari dzako dziri kubhabhatidzwa, zvinoreva kuti newewo wagadzirira kubhabhatidzwa.
KANA uri kurarama maererano nemirayiro yaMwari, uchikudziridza ushamwari naMwari uye uchiudza vamwe zvaunotenda, unobva wangofunga nezvokubhabhatidzwa. Asi unoziva sei kana wagadzirira danho iroro? Kukubatsira kuti upindure mubvunzo iwoyo, ngatikurukurei zvirevo zviri pamusoro apa zvinoda kupindurwa kuti chokwadi kana kuti nhema.
● VaKristu vanofanira kubhabhatidzwa.
Chokwadi. Jesu akarayira kuti vadzidzi vake vabhabhatidzwe. (Mateu 28:19, 20) Kutaura zvazviri, Jesu pachake akabhabhatidzwa achizvidira. Kuti utevere Kristu, unofanira kubhabhatidzwa paunenge wakura zvakakwana zvokugona kusarudza izvozvo uye wava kunyatsoda kubhabhatidzwa.
● Chinangwa chikuru chokubhabhatidzwa ndechokukubatsira kuti usaita chivi.
Nhema. Kubhabhatidzwa chiratidzo chepachena chokuti wakazvitsaurira kuna Jehovha. Kuzvitsaurira kwako hachisi chibvumirano chinokurambidza kuita zvinhu zvawaizoda kuita muchivande. Pane kudaro, wakazvitsaurira kuna Jehovha nokuti unoda kurarama maererano nemirayiro yake.
● Kubhabhatidzwa kunoita kuti uwane ruponeso.
Chokwadi. Bhaibheri rinoti kubhabhatidzwa idanho rinokosha rokuwana ruponeso. (1 Petro 3:21) Zvisinei, izvi hazvirevi kuti kubhabhatidzwa kwakaita seinishuwarenzi yaunotenga kuti uzvidzivirire kana wapinda munjodzi. Unobhabhatidzwa nokuti unoda Jehovha uye unoda kumushumira nokusingaperi nomwoyo wako wose.—Mako 12:29, 30.
● Kana usina kubhabhatidzwa, hauzvidaviriri kuna Mwari pane zvaunoita.
Nhema. Jakobho 4:17 inoti: “Kana munhu achiziva kuita zvakarurama asi asingazviiti, iye ari kuita chivi”—pasinei nokuti akabhabhatidzwa kana kuti kwete. Saka kana uchiziva zvakarurama uye wakura zvakakwana zvokugona kunyatsofungisisa nezvoupenyu hwako, zvichida iyi ndiyo nguva yokutaura nyaya yacho nomubereki kana kuti nomumwe muKristu akura. Ukaita izvozvo, unogona kudzidza kuti ungafambira mberi sei kusvika pakubhabhatidzwa.
● Kana shamwari dzako dziri kubhabhatidzwa, zvinoreva kuti newe wagadzirirawo kubhabhatidzwa.
Nhema. Kusarudza kubhabhatidzwa kunofanira kubva pamwoyo wako unoda. (Pisarema 110:3) Unofanira kungobhabhatidzwa chete kana wava kunyatsoziva kuti kuva mumwe weZvapupu zvaJehovha kunosanganisirei uye paunenge wava nechokwadi chokuti wagadzirira kuita izvi.—Muparidzi 5:4, 5.
Danho Rinochinja Upenyu
Kubhabhatidzwa idanho rinochinja upenyu rinoita kuti uwane zvikomborero zvakawanda. Panguva imwe chete, kunosanganisira basa chairo—rokurarama maererano nokuzvitsaurira kwawakaita kuna Jehovha.
Wava pedyo nokutora danho iri here? Kana zvakadaro, une chikonzero chakanaka chokufara. Wakamirirwa neropafadzo inopfuura dzose—yokushumira Jehovha nemwoyo wose uye kurarama nenzira inoratidza kuti zvechokwadi wakazvitsaurira kwaari.—Mateu 22:36, 37.
ZVIRI MUCHITSAUKO CHINOTEVERA
Dzidza kuti ungava sei nezvinangwa kuitira kuti ugone kushandisa upenyu hwako nokuchenjera.
RUGWARO RUNOBUDISA PFUNGWA HURU
“Mupe miviri yenyu sechibayiro chipenyu, chitsvene, chinogamuchirika kuna Mwari, iro basa dzvene nesimba renyu rokufunga.”—VaRoma 12:1.
Uchibatsirwa nevabereki vako, tsvaka mumwe munhu muungano anogona kukubatsira kuti ufambire mberi mune zvokunamata.—Mabasa 16:1-3.
WAIZVIZIVA HERE KUTI . . . ?
Kubhabhatidzwa chimwe chezvinhu zvinokosha zvinoumba “chiratidzo” chokuti uchapona.—Ezekieri 9:4-6.
Kuti ndifambire mberi kusvika pakubhabhatidzwa, ndicha- wedzera kunzwisisa kwandinoita dzidziso dzeBhaibheri dzinotevera: ․․․․․
Izvi ndizvo zvandingada kubvunza vabereki vangu nezve- nyaya iyi ․․․․․
● Nei kubhabhatidzwa riri danho rinokosha kudaro?
● Chii chingaitisa kuti wechiduku anyanye kukurumidza kubhabhatidzwa?
● Chikonzero chipi chingaita kuti wechiduku averengere nokusachenjera kuzvitsaurira uye kubhabhatidzwa?
[Mashoko okukwezva vaverengi ari papeji 306]
“Kuziva kuti ndakanga ndabhabhatidzwa kwakandibatsira kusarudza nokuchenjera uye kuti ndisaita chimwe chinhu chingadai chakazondipinza mutsekwende.’’—Holly
[Bhokisi/Mufananidzo uri papeji 307]
Mibvunzo Inowanzobvunzwa Nezvorubhabhatidzo
Rubhabhatidzo runofananidzirei? Kunyudzwa mumvura uye kubudiswa zvinoreva kuti wafa muupenyu hwokuraramira kutsvaka zvaunoda uye waitwa mupenyu kuti uite zvinodiwa naJehovha.
Zvinorevei kutsaurira upenyu hwako kuna Jehovha? Zvinoreva kuzviramba, uchivimbisa kuisa zvinodiwa naMwari pamberi pezvose. (Mateu 16:24) Zvakakodzera kuti uzvitsaurire nemwoyo wose kuna Jehovha mumunyengetero pane imwe nguva usati wabhabhatidzwa.
Unofanira kunge uchiitei noupenyu hwako usati wabhabhatidzwa? Unofanira kunge uchirarama maererano neShoko raMwari uye uchiudza vamwe zvaunotenda. Unofanira kunge uchikudziridza ushamwari naMwari kuburikidza nomunyengetero uye kudzidza Shoko rake. Unofanira kushumira Jehovha nokuti ndozvawakasarudza—kwete nokuti vamwe vari kuti uite izvozvo.
Pane zera here rinonzi ndiro raunofanira kubhabhatidzwa? Zera harisiro rinonyanya kukosha. Asi unofanira kunge wanyatsokura—uye uchiziva zvauri kuita—zvokuti unonzwisisa zvinoreva kuzvitsaurira.
Ko kana uchida kubhabhatidzwa asi vabereki vako vachiti umbomira? Zvichida vanenge vachida kuti umboziva zvinodiwa pakurarama kwechiKristu. Koshesa mazano avo, uye shandisa nguva ino kusimbisa ushamwari hwako naJehovha.—1 Samueri 2:26.
[Bhokisi riri papeji 308, 309]
Uri Kufunga Nezvokubhabhatidzwa Here?
Ona kuti wafambira mberi zvakadini nokufunga mibvunzo uye zvirevo zviri pasi apa. Iva nechokwadi chokuverenga magwaro aripo usati wanyora mhinduro dzako.
Uri kuratidza kuvimba naJehovha munzira dzipi iye zvino?—Pisarema 71:5. ․․․․․
Wakaratidza sei kuti masimba ako okunzwisisa akarovedzwa kusiyanisa zvakanaka kubva pane zvakaipa?—VaHebheru 5:14. ․․․․․
Unonyengetera kakawanda sei? ․․․․․
Minyengetero yako yakajeka zvakadini, uye inoratidzei nezvokuda kwaunoita Jehovha?—Pisarema 17:6. ․․․․․
Nyora pasi apa zvinangwa chero zvipi zvaungada kuva nazvo zvine chokuita neminyengetero yako. ․․․․․
Unodzidza Bhaibheri uri woga kakawanda sei?—Joshua 1:8. ․․․․․
Zvii zvaunobatanidza paunodzidza uri woga? ․․․․․
Nyora pasi apa zvinangwa zvaungada kuva nazvo zvine chokuita nokudzidza uri woga. ․․․․․
Ushumiri hwako huri kubudirira here? (Mienzaniso: Ungatsanangurira vamwe dzidziso huru dzeBhaibheri here? Unodzokera kune vanhu vanofarira here? Uri kuedza kuti uve nomumwe munhu waunodzidzisa Bhaibheri here?)
□ Hungu □ Kwete
Unobuda muushumiri kunyange vabereki vako vasingabudi here?—Mabasa 5:42.
Nyora pasi apa zvinangwa chero zvipi zvaungada kuva nazvo zvine chokuita noushumiri hwako.—2 Timoti 2:15. ․․․․․
Ungati kupinda kwaunoita misangano ndekwenguva dzose here kana kuti ndekweapo neapo?—VaHebheru 10:25. ․․․․․
Unoitawo zvimwe zvinhu pamisangano munzira dzipi? ․․․․․
Unopinda misangano vabereki vako pavasingakwanisi here (kana vachikubvumira kudaro)?
Ungataura kuti unofarira zvechokwadi kuita zvinodiwa naMwari here?—Pisarema 40:8.
Unganyora here kuti ndepapi nepapi pawakaramba kufurirwa nevezera rako?—VaRoma 12:2. ․․․․․
Uri kuronga sei kuti kuda kwaunoita Jehovha kurambe kwakasimba?—Judha 20, 21. ․․․․․
Ungashumira Jehovha kunyange vabereki vako neshamwari dzako vakarega kudaro here?—Mateu 10:36, 37.
[Mufananidzo uri papeji 310]
Kufanana nomuchato, kubhabhatidzwa idanho rinochinja upenyu—hakufaniri kurerutswa
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Ndinofanira Kubhabhatidzwa Here?
Kukura Kwako Pakunamata
yp2 chits. 37 pp. 304-310
Ndingawana Kupi Mazano Akanakisisa?
Kufambidzana Nomumwe Munhu Muchivande—Kwakaipei?
Munhu Uyu Ndiye Akandikodzera Here?
Ndepapi Pazvinonzi Zvapfurikidza?
Kurambirei Ndiri Mhandara?
Zvoupenyu Hwangu​—Vakomana Nevasikana
Kuchinja Kunoitika Muupenyu
Chii Chiri Kuitika Kumuviri Wangu?
Ko Kana Ndichivenga Chitarisiko Changu?
Nei Ndichirwara Zvakadai?
Zvoupenyu Hwangu​—Kuchinja Kunoitika Muupenyu
Ndingakurira Sei Kusurukirwa?
Nei Shamwari Yangu Yakandirwadzisa?
Zvakadini Noushamwari HwepaIndaneti?
Chikoro Uye Vezera Rako
Ndingaita Sei Zviri Nani Kuchikoro?
Ndingazvidzivirira Sei Kuchikoro
Ndingaramba Sei Kufurirwa Nevezera Rangu?
Upenyu Huviri—Ndiani Anofanira Kuzviziva?
Ndinofanira Kuzivei Nezvoushamwari Hwokuchikoro?
Muenzaniso Wokutevedzera​—VaHebheru Vatatu
Zvoupenyu Hwangu​—Chikoro Uye Vezera Rako
Ndingaita Mari Sei?
Ndingashandisa Sei Mari Yangu Zvakanaka?
Ko Kana Tiri Varombo Mumhuri Medu?
Muenzaniso Wokutevedzera​—Chirikadzi Murombo
Zvoupenyu Hwangu​—Nyaya Dzemari
Ndingaita Sei Nokutsoropodzwa?
Nei Paine Mitemo Yakawanda Kudai?
Ko Kana Mubereki Wangu Akapindwa Muropa Nezvinodhaka Kana Kuti Nedoro?
Ndinofanira Kuitei Kana Vabereki Vangu Vachipopotedzana?
Ndingafara Here Mumhuri Ine Mubereki Mumwe?
Zvoupenyu Hwangu​—Vabereki Vako
Ndingadzora Sei Manzwiro Angu?
Nei Ndichifunga Kuti Ndinofanira Kuita Zvinhu Ndisingakanganisi?
Ndingadzivisa Sei Ungochani?
Ndingaita Sei Kuti Ndisaramba Ndichifunga Zvebonde?
Zvoupenyu Hwangu—Manzwiro Ako
Ndinofanira Kutamba Mitambo Yemavhidhiyo Here?
Ndingaita Sei Kuti Ndisanyanya Kukoshesa Mimhanzi?
Ndingava Sei Nenguva Yokufara?
Nei Ndisingafaniri Kuona Zvinonyadzisira?
Nei Ndichifanira Kurarama Maererano Nemirayiro yeBhaibheri?
Ndingava Sei Shamwari yaMwari?
Ndingadzivirira Sei Kutenda Kwangu Muna Mwari?
Ndichaitei Noupenyu Hwangu?
Zvoupenyu Hwangu​—Kukura Kwako Pakunamata
Panowanikwa Pepa Rokushandira
Mukati Mebutiro Rokupedzisira
Text Nzira dzokudhaunirodha nadzo mabhuku Mibvunzo Inobvunza Vechiduku—Mhinduro Dzinoshanda, Bhuku 2
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Mibvunzo Inobvunza Vechiduku—Mhinduro Dzinoshanda, Bhuku 2
Chii Chinonzi Rudo Rwechokwadi?
Vechidiki Vanobvunza Kuti—Ndichaitei Muupenyu?